सल्यानका एक व्यक्ति विनाकारण एक वर्षदेखि साउदीकाे जेलमा
विनाकारण सल्यानका एक व्यक्ती एक वर्षदेखि साउदी सरकारकाे जेलमा परेका छन् ।
राेजगारकाे सिलसिलामा २ बर्ष अघि साउदी अरब पुगेका सल्यान कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर १ साधान्मुडाका बल बहादुर बस्नेत विनाकारण एक वर्षदेखि साउदी सरकारकाे जेलमा परेका हुन् ।धापासी काठमाण्डाैँमा रहेकाे एस.अाे.एस. म्यानपावर सर्भिस प्रा. लि. बाट राेजगारकाे लागी साउदी पुगेका वस्नेत बिरामी परेर एक दिन डिउटी नजादा मालिकले मनपरि ढङगले जेल पठाएका हुन् ।
वस्नेतले काम सुरुकाे १० महिना पुगेको समय २०७३ कार्तिक २७ गते (Date 13/7/2016) काे दिन उक्त कम्पनीमा कार्यरत नेपाली कामदारहरुले मालिक सङ्ग श्रम गरेबापतकाे तलब मागेका थिए । तर मालिकले उनिहरुलार्इ हस्तक्षेप गर्न खाेजेपछि केहि विवाद हुन पुगेकाे थियाे । त्यहि समयमा वस्नेत कारणबस बिरामी परेका थिए । बिरामीको कारणले गर्दा उनि १ एक दिन डिउटी जान नसकेर अाफ्नै कम्पनीको काेठमा सुतेका थिए । काेठमा सुतेकाे समयमा उनको कम्पनीको मालिकले साउदी अरबियको पुलिस प्रशासन लगाएर एक्कासी जेल घरमा लगिएकाे हाे ।
केही समय पछी उनकाे पिडादाएक खबर घरपरिवारले थाहा पाएपछि वस्नेतलार्इ छुटाउन धेरै पहल गरेपनि कतैबाट कुनै हात नलागेकाे परिवाले बताएकाे छ । उनलार्इ बिदेश पठाउने दलाल धनबिर बि.क. ले माेबाइल अफ गरेर अहिले अत्ताेपत्ताे छैन् । सुरुमा म पहल गर्छु भनेका बिक काठमाण्डाैँ जानलार्इ परिवारकाे पैसा लिएर काेहाेलपुरबाट फरार भएका थिए ।
पिडितलार्इ छुटाउन उनका साथिभार्इ र अाफन्तजनहरुले म्यानपावर, राजदुतावास लगाएतका विभिन्न ठाउँहरुमा जानकारी गराउदा पनि कसैले केहि पहल नगरेकाे पिडितका जेठान देवेन्द्र राणाले बताएका छन् । अहिले राणा न्याय पाउँ भन्दै कुमाख गाउँपालीकाकाे कार्यालयमा पुगेका छन् । रानाले अाफ्ना ज्वार्इ वस्नेतलार्इ साउदी सरकारकाे जेलबाट छुटाउन सबैलार्इ पहल गरिदिन अाग्रह गरेका छन् ।